AGG yinkampani beentlanga ingqalelo kuyilo, ukwenziwa kunye nokusasazwa iinkqubo gezi naMandla advanced solutions.Backed yi waphuma Ingcaphephe yasekuhlaleni inkxaso umthengisi, AGG Amandla ke ababoneleli brand ehlabathini lonke baye ukuze angabuyeli kuba wathembela noluthembekileyo supply amandla ekude .
Amava ethu ukusebenza kunye nabasebenzisi ezinkulu, ezifana kushishino Telecoms, kuye kwabangela ukuba kuyilwe nokubaleka elide iitanki amafutha ngokhuseleko yongezwe engqondweni.
Senze uluhlu esemgangathweni 500 1000 kwamatanki ilitha, nokuba batshatile okanye onodonga kabini. Ngenxa yokuba wonke umntu iimfuno ezahlukeneyo, iinjineli zethu ingcali ungenza ngokusesikweni umnikelo lwethu ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Ngenxa elihamba iinkqubo zolawulo ezifundisa iiphakheji zonxibelelwano ekude, siya kwenza ukuba kubekwe iliso kwaye nokulawula izixhobo zakho kwi-ofisi okanye xa uyaguquka.
Ngoku upakisho abaninzi panel yokulawula efakiwe apps smart ukuba abonelele ngofikelelo parameters iseti generator ngamnye kukuvelisa izaziso nayiphi na imiba kulwazi site.Advance zendaba yenza ukuba igunya resource efanelekileyo, ukonga ukutyelela ongabanga yaye ekugqibeleni, imali.